Dhaqanka Shoogga - Qabsashada Nolosha America | The Refugee Center Online | Refugee Center Online
Sida aad la qabsato dhaqan cusub, laga yaabaa in aad maraan waqtiyo kala duwan, halkaas oo aad ka dareento siyaabo kala duwan. Qayb ka mid ah habka loo yaqaan “naxdinta dhaqameed.” Fahamka saabsan naxdinta dhaqameed kaa caawin doona inaad aqbasho dareenka oo aad u fudud si ay ula qabsadaan.
edeb Image ee Xarunta Waxtarmada Hanuuninta Dhaqanka ee
Sawirka kor ku xusan ayaa muujinaya sida ay dadku dareemaan sida ay maraan marxaladaha sixitaanka dhaqanka. Bal aynu eegno marxaladaha ku faahfaahsan.
1. wajiga Malabka The
Marka ugu horaysa ee aad timaado USA, laga yaabaa in aad dareento faraxsanahay waana ku faraxsanahay. Waxaa laga yaabaa in badan oo gool iyo filashooyinka waxa dhici doona in aad nolol cusub. Waxaa hubaal in aad sugayeen inuu yimaado America muddo dheer. Waxaa laga yaabaa in aad maqashay waxyaabo badan oo weyn oo ku saabsan USA. Waxaad filan in aad si deg deg ah u heli doonaan shaqo wanaagsan, Guri fiican, iyo kasban Ingiriisi. Waxaa laga yaabaa inaad habdhiska, laakiin waxa aad u rajeyneynaa in wax walba oo cusub ee America.
2. wajigii naxdinta dhaqameed The
Inta lagu jiro muddada this, laga yaabaa in aad dareento kacsan iyo murugo. Waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad carooto. Waxaa laga yaabaa inaad dareentid cabsi ama dhab ahaantii ka maqnaan dalkaagii hooyo.
Haddii aadan ku hadlin Ingiriis, wajigii naxdinta dhaqameed ku socon karaa wakhti dheer ah. Si ay kuu caawiyaan inta lagu jiro waqtigan, waa in aad isku daydo in ay la kulmaan qaxootiga kale ee ka dhaqanka iyo ka heli dukaamo iibiya cuntada dhaqanka.
Calaamadaha shoog dhaqanka waxaa ka mid ah:
fekerayo in wax walba waa wasakh
aad u badan oo hurda
Waxaa laga yaabaa inaad u malaynayso in dhaqanka American waa cabsi ama in aadan jeclaan wax ku saabsan America. Fadlan garanaynaa kani inuu waji dhexeeya dhammaan dadka ku nool dhaqamada cusub. Ugu dambayntii, inaad wajiga labaad dhaqaaqi doono. Haddii aadan ka guurto on, oo weli aad dareento murugo ama xanaaq, laga yaabaa in aad u baahan tahay qaar ka mid ah caawimo dheeraad ah, oo waa inaad la hadashaa shaqaalaha kiiskaaga ku saabsan. Qaxooti ahaan, aad soo maray waxyaalo badan oo adag oo ay tahay oo dhan xaq u baahan caawimo dheeraad ah.
3. wajiga qabsiga The
Muddo ka dib, aad rajeynayaa dhaqaaqi doono ee la soo dhaafay wajigii naxdinta dhaqameed iyo aad bilaabi doonaan in ay la qabsato nolosha Maraykanka. Waxaad bilaabi si ay u fahmaan xaqiiqada dhabta ah ee nolosha noqon doonaa sida dal cusub. Waxaad go'aansan kartaa inaad qaadato shaqo lacag yar sababtoo ah waxa ay kaa caawin doontaa in aad qoyska. Waxaad bilaabi doonaan in ay bartaan Ingiriisi. Waxaad u badan tahay in laga bilaabo si ay leeyihiin joogtada ah. Life bilaabmaa si ay u dareemaan caadiga ah.
Mid ka mid ah tartan caadi ah inta lagu jiro waqtigan aan ku jirno waa in carruurtaada laga yaabaa in nolosha USA si deg deg ah in ka badan aad tahay hagaajinta. Tani waa mid caadi ah, laakiin waxaa jira waxyaabo aad samayn karto si ay u caawiyaan caruurta aad joogto xiran dhaqanka gurigaaga.
4. wajiga qabsashada
Tani waa wajiga ugu danbeeya ee la qabsiga dhaqanka. Inta lagu jiro wakhtigan, America bilaabi doonaa si ay u dareemaan sida guriga. Waxaad bilaabi doonaa si ay u dareemaan sida aad halkan iska leh. Waxaad hadda qasan kartaa qaybo ka mid ah dhaqanka American leh qaybo ka mid ah dhaqanka. Waxaa laga yaabaa in aad wax run ahaantii sida oo ku saabsan Mareykanka iyo wax aad runtii maal ka dalkaaga hooyo. Waxaad si fudud u eegi kartaa nolol maalmeedkaaga ee dalka Mareykanka. laga yaabaa in aad leedahay saaxiibo American qaar ka mid ah iyo qaar ka mid ah asxaabta ayaa sidoo kale soo galootiga iyo qaxootiga. Hadda waa waqtiga si ay u sii wanaajiyo waxbarashada. Waxaad dooran kartaa in aad noqoto muwaadin American.
Waalid ee America